ICRC oo ka hadashay weerarkii xarunta Bisha Cas ee Baardheere | KEYDMEDIA ONLINE
ICRC oo ka hadashay weerarkii xarunta Bisha Cas ee Baardheere
Xarunta caafimaad ee Bisha Cas ee Baardheere waxay qeyb ka tahay 29 xarun caafimaad oo ay Soomaaliya ku leedahay Laanqeyrta Cas oo ay ICRC-du taageerto.
BAARDHEERE, Soomaaliya - Weerarkii 28 bishan lagu qaaday xarunta ururka Bisha Cas ee magaaladda Baardheere ee gobolka Gedo ayay si wadajir ah u cambaareeyeen gudiga caalamiga ah ee Laanqerta Cas (ICRC) iyo ururka Bisha Cas ee Soomaaliyeed (SRCS).
Qoraal mideysan oo ay u soo saareen waxa ay ku sheegeen inay ka xun yihiin falkii lagu gubay xaruntii Bisha Cas ee Baardheere iyo dhaawac loo geystey qaar ka mid ah shaqaalihii xaruntaas.
“Dabka ayaa gabi ahaanba baabi’yay xarunta iyada oo ay damintiisuna saacado badan qaadatay, waxaan qiimeyneynaa waxyeellada soo gaartay xarunta caafimaadka laakiin burburka ayaa aad u ballaaran.“ ayuu yiri Axmed Maxamed Cadale, agaasimaha SRCS.
Dabka loo geystey xarunta Bisha Cas, illaa labo kun oo ruux oo baaritaanno loogu sameyn jirey bil walba ayay saameyn ku yeelatay sida uu tilmaamay madaxa ICRC ee dalka Soomaaliya Juerg Eglin.
“Qoysaska xarunta ka heli jiray daryeel caafimaad ayaa hadda ku qasban in ay meelo kale u raadsadaan daaweyn. Qiil ma lahan sabab loo weerari karo xarun ama shaqaale caafimaad, mana ahan wax-la-aqbali karo.” ayuu yiri madaxa ICRC-da ee Soomaliya.
Sannadkii 2000 ayaa la furay xarunta caafimaadka Baardheere, waxaana ka howl gala 19 shaqaale caafimaad ah, sannadkii 2018 ayaa la ballaariyay xaruntan, iyada oo bixisa adeegyo caafimaad oo lacag la’aan ah oo isugu jira daryeelka bukaan socodka, barnaamijka nafaqeynta iyo bartilmaameedka quudinta dheeriga ah si qoysaska looga kaalmeeyo in ay ka hortagaan nafaqo darrida dhallaanka.